Maamulada Jubaland & Puntland oo gudbiyay liiska Gudiga Doorasho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maamulada Jubaland & Puntland oo gudbiyay liiska Gudiga Doorasho
Maamulada Jubaland & Puntland oo gudbiyay liiska Gudiga Doorasho
Wararkii ugu dambeyey ee la xariira gudbinta gudiyada doorasho ayaa waxaa la tilmaamaya in ilaa iyo hadda ay Xubnaha Guddiga doorashooyinka ku matalaya ay gudbiyeen Maamul Goboleedyada kala ah, Koonfur Galbeed, Jubbaland, iyo Puntland.
Sidoo kale Maanta ayaa la sugayaa inay dhankooda soo gudbiyaan Maamulada Galmudug & Hir-Shabeelle oo weli aan soo gudbin.
Dowlad Goboleedyada Puntland, iyo Jubbaland ayaa si rasmi ah u gudbiyay liiska afar xubnood oo Puntland ku matalaya Xubnaha Guddiga Doorashooyinka heer Federaal iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka, kaas oo amba qaadaya howlaha doorashooyinka dalka.
Ugu horeyo Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gudbiyay laba xubnood oo katirsanaa Guddigiisii doorashooyinka ee maareeyey doorashadii muranka sababtay ee dib loogu doortay.
Dhinaca kale Madaxweyne deni ayaa wararka la helay waxaa ay sheegayaan in uu gudbiyay Afar xubnood, kuwaas oo Magacyadooda lagu kala sheegay, Axmed Cabdi Hurre, Qawdhan Abshir Garaad, Cabdiraxmaan Biixi iyo Sadam Siciid Axmed.
20-kii Bishaan ayay ku ekeyd mudada ay ku heshiiyeen Madaxda dowladda & Dowlad goboleedyada in lagu soo Magacaabo Guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka, balse dib u dhac uu ku yimid, waxaana dhawaan la filayaa in si rasmi ah Guddiyada loogu dhawaaqo si loo guda galo arrimaha doorashooyinka dalka.
Maqaal horeFaahfaahinta: qarax caawa ka dhacay Beydhabo
Maqaal XigaDagaal khasaaro geestay oo ka dhacay Gedo.